ခရစ်စမတ်နေ့လည်စာ၊ Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 25, 2006 တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 30, 2012 Douglas Karr
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကောင်း Derekကျွန်ုပ်ကိုကယ်နုတ်ရန်တစ်နေ့လုံးကျွန်ုပ်ထံအီးမေးလ်ပို့ခြင်း၊ ခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်စာပို့ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည် ခရစ်စမတ်ညစာ။ သူ၏ဇနီးအန်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောထမင်းချက်၊ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုသူတို့မိသားစုနှင့်အတူလှပသောညစာစားရန်ယနေ့ (ယခုအချိန်တွင်) လာရောက်စေလိုသည်။ ခရစ်စမတ်သည်မိသားစုအတွက်နေ့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ငါသည်အခြားမိသားစုနှင့်အတူမုန့်ကိုချိုးဖဲ့ရန်ထိုင်ခြင်းမှာရယ်စရာပင်။ သူတို့သည် ဆက်လက်၍ (ရဲများကအချိန်မရွေးလာရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည်) ကိုဆက်လက်ခေါ်သော်လည်းငါညစာကိုရွေးချယ်လိုက်သည်။
ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်၏ကလေးများက“ ငါတို့စားချင်သောပီဇာအမျိုးအစားမည်သို့နည်း” ဒါဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းညစာစားရန်ငါလိုအပ်တဲ့လှုံ့ဆော်မှုပဲ။ ကျနော်တို့အကျင့်ကိုကျင့်ရှိခဲ့ပါတယ်! တူရကီ၊ stuffing၊ အာလူး၊ ဟင်းရည်၊ ရွှေဖရုံသီး၊ လိပ်စသည်တို့အားလုံးပြီးပြည့်စုံစွာထွက်လာသည်။
အခုတော့ခရစ်စမတ်ဖြစ်နေပြီ၊ ကလေးတွေလည်းသူတို့အမေအိမ်မှာရောက်နေတယ်။ အချိန်တန်ပြီ ခရစ်စမတ်ညစာ!
ဒီနေ့မနက် ၃ နာရီမှာဒေသခံ ၂၄ နာရီဆေးဆိုင်ရဲ့အတန်းတွေကိုကြည့်နေတုန်းကျွန်တော့်ကိုတွေ့လိုက်တယ် ခရစ်စမတ်ညစာ:
Lay's Cheddar နှင့် Sour Cream Potato Chips ... မှန်ကန်သောလူများ၊ သူတို့သည်အချိန်ကြာကြာမဖြုန်းတီးရန်သူတို့သည်ချစ်ပ်များထဲသို့နှစ်မြှုပ်ထားကြသည်။ ထိုသူတို့ရောင်းချခဲ့ကြသည်! 1 get 1 အခမဲ့ဝယ်ပါ။
ကမ့်ဘဲလ်၏ကင်အကင် Chunky ငရုတ်သီး ၂ ဘူး။ အကောင်းဆုံးမှအဘယ်အရာကိုမျှ!
Generic Diet Orange လိမ္မော်ဘူး ၂ လုံးသည်ကျွန်ုပ်၏အိမ်နီးချင်းထံမှချေးယူသည် (ကျွန်ုပ်၏ကြောင် ၃ ကောင်အိမ်၌ထိုင်နေသည်)
နှင့်သဲကန္တာရ? ကောင်းတဲ့ ACID Blondie ဆေးပြင်းလိပ်။ (ငါ့စားပွဲပေါ်ရှိဇစ်လော့ခ်တွင်တွေ့သည်။ ပြီးပြည့်စုံသည်)
ခင်ဗျားတို့ကဒီဟာကအစာစားစရာကိုစွန့်လွှတ်ရမယ်လို့ငါထင်တာပဲလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ရုပ်မြင်သံကြားစားပွဲ၊ လက်ဝှေ့သမားတွေနဲ့ထူးခြားတဲ့ Channel ည့်သည်တစ် ဦး ကို History Channel မှာထည့်မယ်။
25:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 4, 36 တွင်
25:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 7, 03 တွင်
အရမ်းရယ်ရတယ် ... အဲဒီမှာအတော်လေးထမင်းစားနေတဲ့ Doug ။ ငါဒီနှစ်တစ်ကိုယ်တော်လုပ်ဆောင်မှုကိုပဲလုပ်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါအစားအာလူးနဲ့ကြက်သားတွေလိုချင်သလိုခံစားရတယ်။ သူများသည်ချစ်ပ်အားကြီးသောဒဏ်ငွေကြည့်ရှု ... ငါအချို့ချင်တယ်။
PS လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုထည့်ရန်နည်းလမ်းရှိသလား၊ ကျွန်ုပ်သည်လည်ပတ်မှုတိုင်းကိုစနစ်ကမှတ်မိသလား။ ကျွန်ုပ်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုတစ်ကြိမ်လျှင်တစ်ကြိမ်ပြန်ဆိုရန်မနှစ်သက်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
25:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 10, 42 တွင်
ပြီးခဲ့သည့်ညကမှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါအဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါထုတ်ကုန်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ 26, 2006 မှာ 2: 54 AM
ဒီဇင်ဘာ 26, 2006 မှာ 7: 35 AM
အိုး။ ငါရတယ်၊ မင်းက MY ဖုန်းခေါ်တာကိုမပြန်ဘူး၊ 🙂
PS - မင်းရဲ့ညစာက LAME ပါ။ Pizza Rolls ဟာလူသားရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်။
26:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 12, 05 တွင်
ခရစ္စမတ်ညစာစားပွဲမှာ Doug ကိုတွေ့ဖို့တစ်ယောက်ယောက်ကမျှော်လင့်တဲ့အခါဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအခုကြည့်ဖို့သင်ယခုသင်လိုအပ်သည်။ http://www.drumminguy.com/?p=195
26:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 3, 55 တွင်
ငါ Bill ပိုကောင်းအောင်သွားမယ်။
နောက်တစ်ကြိမ်တွင်သင်၏မိတ်ဆွေများထံမှကောင်းမွန်သောအစားအစာ၊ စပျစ်ရည်ကောင်း (ဆေးပြင်းလိပ်ကောင်းကောင်း) နှင့်ကောင်းသောစကားလက်ဆုံပြောဆိုခြင်း - ပြီးပြည့်စုံသောမုန့်ညက်အတွက်ပါ ၀ င်သည့်အရာအားလုံးကိုလက်ခံပါ။
27:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 3, 15 တွင်
သင်ရုံ Derek ထိုကဲ့သို့သော dork ကြောင့်သင်ရုံမသွားဘဲ ပြီးတော့သူကအဲဒီသတင်းစာပိုးမွှားတွေရှိတယ်။ မင်းကိုဆင်ခြေမပေးရဘူး။ ငါဤအစာအာဟာရကိုအစာစားပြီးနောက်သင်သေချာပြီးနောက်သူသည်သင်တို့နောက်မှမလာခဲ့ပါဘူးဝမ်းမြောက်မိပါတယ်သေချာပါတယ်။